साख जोगाउँदै साँखु- फिचर - कान्तिपुर समाचार
वैशाख १२, २०७६ दामोदर न्यौपाने
काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले केही बस्तीलाई 'सम्पदा बस्ती' घोषणा गर्दा त्यसमा साँखु पनि पर्‍यो । शंकरापुर नगरपालिकाले पनि मौलिकता जोगाउने नीति ल्याएपछि साँखु प्राचीनता जोगिने गरी पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।
साँखुका राजन श्रेष्ठले झट्ट हेर्दा दरबार वास्तुकला झल्कने घर बनाएका छन् । घरको अगाडिपट्टिकाे भाग परम्परागत शैलीको छ । सन्झया, टिकी झयाजस्ता परम्परागत झयाल राखिएका छन् । इँटा देखिने गरी गारो लगाइएको छ ।
यस्तै घर बनाउने अर्का स्थानीय हुन्, श्रीराम श्रेष्ठ । उनले पनि परम्परागत नेवारी वास्तुकला झल्कने गरी घर बनाएका छन् । साँखुलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने तयारी चलिरहेकै बेला भुइँचालो गएको थियो । प्राचीन यो बस्ती क्षणमै खण्डहरमा परिणत भयो ।
नयाँ निर्माण गर्दा यहाँको वास्तुकला मासिएला भन्ने चिन्ता संरक्षण अभियन्ताको थियो । उनीहरूले झकझकाउने काम गरिरहे । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले केही बस्तीलाई 'सम्पदा बस्ती' घोषणा गरेर काम अगाडि बढायो, त्यसमा साँखु पनि पर्‍यो । शंकरापुर नगरपालिकाले पनि मौलिकता जोगाउने नीति ल्यायो । त्यही कारण साँखु प्राचीनता जोगिने गरी पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।
उपत्यकाका बस्तीमध्ये भुइँचालोले सर्वाधिक धनजनको क्षति पुर्‍याएको बस्ती हो, साँखु । लगभग ९५ प्रतिशत घरमा क्षति पुगेको थियो । क्षतिग्रस्तमध्ये अधिकांश घर निर्माण भइसकेका छन् । शंकरापुर नगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष सन्तबहादुर वाइवाका अनुसार ८५ प्रतिशत घर निर्माण भइसकेका छन् ।
विश्व सम्पदामा राख्न असर नपर्ने गरी बस्ती निर्माण गर्न नगरपालिकाले मापदण्ड बनाएको छ । यो मापदण्ड पूरा गर्नेलाई सहुलियत दिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छवटा सहरलाई प्राचीन सहर घोषणा गरेको छ । त्यसमध्ये साँखु पनि पर्छ ।
प्राचीन सहर घोषणा गरेको ठाउँमा मौलिकता झल्कने गरी बनाइएको घरलाई थप सहुलियत दिएको छ । यस्तो घरलाई प्राधिकरणले थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । आफ्नो मापदण्डअनुसार बनाउने घरलाई शंकरापुर नगरपालिकाले थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । प्राधिकरण र नगरपालिकाको अनुदानसमेत गरेर पीडितले थप डेढ लाख रुपैयाँ पाउँछन् ।
'सबै सहुलियत गरेर झन्डै ६ लाख रुपैयाँ पाउँछन् सम्पदा बस्तीले,' वडाध्यक्ष वाइवा भन्छन्, 'हामीले कर छुट दिएका छौं । टिम्बर कर्पाेरेसनले ५० क्युफिट काठ सहुलियतमा दिएको छ । यही सुहलियत दिएकै कारणले पनि साँखुमा परम्परागत घर बनाउन प्रोत्साहन भयो ।' ५० हजार थप अनुदान परम्परागत इँटा खरिद गर्न दिएको हो ।
प्राचीन सहर घोषणा गरिएको बस्तीमा साँखुु, ललितपुरको खोकना, बुङमती, गोरखा बजार, दोलखाको भीमेश्वर र नुवाकोट दरबार क्षेत्र छन् । ती बस्तीको पुरानो सम्पदा र स्वरूपलाई कायम राख्दै त्यहाँको कला, संस्कृति संरक्षण गर्न प्राधिकरण कार्यकारी सदस्य ध्रुवप्रसाद शर्मा र हरिराम पराजुली रहेको कार्यदलसमेत बनाइएको थियो । ती बस्तीको बाहिरी स्वरूप प्राचीन शैलीकै बनाउन इँटाको गारो बाहिर देखिने गरी लगाउन र परम्परागत झयाल हाल्न प्रोत्साहन गरिएको थियो । बस्तीमा नक्सा पास निःशुल्क गर्नसमेत प्राधिकरणले स्थानीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
बस्तीभित्र छिर्दा पहिलाको भन्दा पनि राम्रो साँखु बनेको बताउँछन्, स्थानीयवासी महेन्द्र श्रेष्ठ । पहिला सानो घर हुनेले पनि अहिले ठूलो बनाएका छन् । पहिला परम्परागत नहुनेले पनि अहिले परम्परागत बनाएका छन् ।
झट्ट हेर्दा बनेको देखिए पनि भित्री कथा भने बेग्लै छ । सरकारले दिएको ४ लाख ५० हजारले कस्तो घर बनाउनु ? साँखुका पवनलाल श्रेष्ठ यस्तै प्रश्न गर्छन् । उनले पुर्खाले जोडेको जग्गा बेचेर घर बनाए । पाँच आना एक पैसा खेतीयोग्य जमिन बेचेर घर ठडयाएका छन् । 'साढे दुई तलाको घर बनाएँ,' उनी भन्छन्, 'जग्गा बेचेर २१ लाख रुपैयाँ आयो । सरकारले दिएको अनुदानले त के पुग्नु ? एक तला पनि पुगेन ।'
उपत्यकाका बस्तीमध्ये भुइँचालोले सर्वाधिक धनजनको क्षति पुर्‍याएको बस्ती हो साँखु । लगभग ९५ प्रतिशत घरमा क्षति पुगेको थियो । ७० जनाको मृत्यु भयो । भुइँचालो गएको केही घण्टामै देशविदेशबाट सहयोगको ओइरो लाग्यो ।
दाताहरूको प्रतिबद्धता आएको सुन्दा साँखुका पवनलाल श्रेष्ठले जग्गा बेचेर घर बनाउनुपर्ला भनेर कल्पनै गरेका थिएनन् । उनले घर बनाउन पुर्खाले जोडेको जग्गा बेचेका छन् । पाँच आना एक पैसा खेतीयोग्य जमिन बेचेको उनले सुनाए । 'साढे दुई तलाको घर बनाउन सुरु गरेको छु । ढलान सकियो । अब निर्माण सम्पन्न गर्नु छ,' उनी भन्छन्, 'जग्गा बेचेर २१ लाख रुपैयाँ आयो । यसमा सरकारले दिने अनुदानसमेत गर्दा खर्च पुग्छ होला ।'
जग्गा बेचेर घर बनाउने पवनलाल एक्ला होइनन् । घर बनाउने सबैजसोले जग्गा बेचेरै बनाउन लागेका छन् । '९९ प्रतिशतले जग्गा बेचेरै बनाउन लागेका हुन्,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'अरू आम्दानी नभएपछि के गर्नु ? सधैं टहरोमा बस्ने कुरा पनि भएन । भुइँचालो जानासाथ विदेशबाट सहयोगको ओइरो लागेको समाचार आएका थिए । त्यो समाचार सुन्दा त जग्गा बेचेर घर बनाउनु पर्ला भनेर कल्पनै गरिएको थिएन तर सोचे जस्तो भएन ।'
बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचेर घर बनाउँदा गर्व नलागेको श्रेष्ठको गुनासो छ । 'कमाएर बनाउन सकेको भए पो,' उनी भन्छन्, 'बाउबाजेको सम्पत्ति मासियो । पछि पनि यस्तै समस्या आइपर्ला । फेरि घर भत्केला । पुख्र्यौली सम्पत्ति मासिएपछि आउँदो पुस्ताले के गरी खाला ?'
बस्तीमा ८ सय ८५ घर थिए । त्यसमध्ये ८ सय घरमा क्षति पुगेको थियो । साँखुमा थोरै जमिनमा धेरै घर छन् । मुख्य समस्या यही हो । भुइँचालो गएपछि झन् धेरै परिवारले घर बनाउनुपर्‍यो । जग्गा थोरै छ । थोरै जग्गा पनि भाइ-भाइमा बाँड्नुपर्दा क्षेत्रफल सानो हुन गयो । सानो क्षेत्रफलमा नगरपालिकाको मापदण्डअनुसार नक्सा बनाउन समस्या भयो । कुनै घर तीन दाममा समेत बनेका छन् ।
यस्तो समस्या पर्नेलाई सुरुमा नगरपालिकाका कर्मचारीले दुःख दिए । यही विषय समेटेर समाचार छापियो । त्यसपछि भने सहज भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । 'पहिला पास गर्न झमेला गरिदिए,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'पछि सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि सजिलो भयो । नत्र नक्सा पास गर्न नगरपालिकाका कर्मचारीले पूरै सिन्डिकेट लगाइदिएका थिए । नगरपालिकाकाकै इन्जिनियरले बनाइदिए तुरुन्त पास गरिदिने । बाहिरको बनाए दुःख दिने गरेका थिए ।'
साँखु उपत्यकाको प्राचीन बस्ती हो । सन् २०१० मा नेपाल र जापानका भूगर्भविद्ले काठमाडौं उपत्यकाबारे अध्ययन गरेका थिए । अध्ययनअनुसार उपत्यका तलाउ हुनु पहिला नै यसको तल्लो र माथिल्लो क्षेत्रमा बस्ती बसिसकेको थियो । जापनाको टोली र नेपालका प्राध्यापक मृगेन्द्रलाल सिंहलगायत अनुसन्धानमा सहभागी थिए । त्यो अनुसन्धानअनुसार उपत्यकाको तलाउ दुईपटक फुटयो ।
पहिलोपल्ट ३० हजार वर्ष पहिला फुटयो । दोस्रोपल्ट १० हजार वर्ष पहिला फुटयो । उपत्यका दह भएकै बेलामा वरिपरिका अग्ला भागमा मानव बस्ती बसिसकेका थिए । त्यतिबेला थने, दधु र क्वने भन्ने बस्ती थिए । थने भनेको माथिको, दधु बीचको र क्वने भनेको तलको बस्ती हो । थने साँखु थियो । बीचको कुन थियो भन्ने यकिन छैन । क्वने खोकना थियो । प्राचीन छुट्टै देश भनेर चिनिएका थिए, बस्ती ।
भुइँचालोले क्षतिग्रस्त बनाउनुअघि साँखुलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने पहल भइरहेको थियो । 'बज्रयोगिनीलाई मात्रै राख्ने कि बजारलाई पनि राख्ने भनेर छलफल भइरहेको थियो,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'छलफलकै क्रममा भुइँचालोले बस्ती सखाप बनाइदियो । बस्ती पूरै बन्न अझै तीन-चार वर्ष लाग्छ । त्यसपछि फेरि यसलाई विश्व सम्पदामा लैजान पहल गर्नेछौं ।'
प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ १०:५३
छोराको हत्या आरोपमा बाबु पक्राउ
दोलखा — अपांगता भएको छोराको हत्या आरोपमा शैलुङ गाउँपालिका-४ का ४४ वर्षीय चुडाबहादुर रेग्मी पक्राउ परेका छन् ।
हिडडुल गर्न नसक्ने २२ वर्षीय छोरा बेदबहादुर रेग्मीलाई फोहर गरेको झोकमा चुडाबहादुरले हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। दोलखास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बुधबार घरमा फोहर गरेपछि उनले छोरा बेदबहादुरको टाउकोमा हतौडाले हानेर हत्या गरि कम्बलमा पोको पारेर खहरे खोलामा फालिएको े प्रहरीले जनाएको छ।
बोल्न र हिड्न नसक्ने बेदबहादुरलाई बैशाखको सुरुवातीदेखि नदेखेपछि शंका लागेर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। बेदबहादुरले घस्रदैँ जताततै दिशापिसाब गरेका कारण हत्या भएको हुनसक्ने प्रहरीको भनाई छ।
प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ १०:२८